RAIISAL WASAARE GEEDI OO MAANTA LA KULMAY MADAX KA SOCOTA EU
Sirte, Libya 4 july
Raiisal Wasaaraha Dowladda Federaalka KMG ee Soomaaliya Prof Cali Maxamed Geedi oo uu wehliyo Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa xalay xarunta uu Shirka Midfowga Afrika ka socdo kula kulmay Wasiirka Iskaashiga iyo Horumarinta u qaabilsan Dalalka midowga Yurub EU Mr Luise Micheal iyo Agaasimahiisa Guud Mr. Stevano Manservice.
Raiisul Wasaaraha Federaalka KMG ee Soomaaliya iyo Wasiirka Iskaashiag iyo Horumarinta waxay kulankaasi iskula soo qaadeen qoddobo muhiim ah oo ay ugu waaweynaayeen:.
1-sidii ay usoo dadajin laheyd ururka midowga Yurub Dhaqaalihii loo qoondeeyay qarashaka lagu soo rarayo Ciidamada ka socda Ururka IGAD ee ka iman doona Dalalka Sudan iyo Yugaanda.
2-In Midowga Yururb ay bixiso Qarashaka dib loogu dhisaayo Ciidanka Boliska Soomaaliyeed ee dhinacayada Mushaaraadka,Tababarida, Qalabeynta iwm.
3-In dalalaka Midowga Yurub ay Dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan Hay'adaha Dowladda ay gacan ku siiyaan diyaarinta qorshaha dib loogu dhisaayo Dalka, gaar ahaan ka gacansiinta Qubaro aqoon u leh diyaarinta Qorshaha Wasaaradaha kala duwan ee Xukuumadda, gaar ahaan Wasaarada Qorsheynta.
Wasiirka Iskaashiga iyo Horumarinta u qaabilsan Midowga Yurub Mr.Luise Micheal wuxuu Ogolaaday Codsigaasi uu soo jeediyay Raiisul Wasaaraha, wuxuuna u sheegay in dhawaan loo soo magacaabi doono Wakiil Daleed oo isku dubarida Howlaha dalalaka EUda ay ka qabanaayaan SDoomaaliya.
Raiisul Wasaare Geedi ayaa lagu wadaa in uu maanta galinka dambe la kulmo Madaxweynaha Komishanka ururka Midowga Yurub Luise Poros.